MW Xasan oo ku dhawaaqay Hindisaha shaqo abuur Qaran | KEYDMEDIA ENGLISH
MW Xasan oo ku dhawaaqay Hindisaha shaqo abuur Qaran
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku dhawaaqay Hindisaha shaqo abuur Qaran oo loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa shaaciyey qorshihiisa horumarinta dhallinyarada, kaasoo xoogga saaraya abuuridda fursadaha shaqo ee dhallinyarada Soomaaliyeed iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo Dowladda.
Madaxweynaha oo shir jaraa’id ku qabtay Madaxtooyada, ayaa xusay in dowladdu ay siin doonto hortebinta 1-aad Hindisaha Shaqo Abuurka Qaran, si dhallinyaradu ay door weyn uga qaataan qorsheyaasha Qaran ee dib-u-dhiska dalka iyo kobcinta dhaqaalaha.
Madaxweynaha ayaa dadka Soomaaliyeed ku dhiirrigeliyey in ay hormuud u noqdaan hal-abuurka iyo hirgelinta qorsheyaasha kobcinta dhaqaalaha dalka, si xal waara loogu helo caqabadaha waaweyn ee shaqa la’aantu ugu horreyso ee ka jira dalka.
“Dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ay shacabka ka yihiin in ka badan 70%. Waxa ay aasaas u yihiin dowladnimada, dhaqaalaha dalka iyo horumarinta arrimaha bulshada. si aan u gaarno isku filnaansho buuxa waxaan ku dhawaaqayaa madal ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku wadaagaan hal abuurkooda iyo horumarinta dowladdooda.” Ayuu yiri MM Xasan.
Madaxweynaha ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay Dowladda kala shaqeeyaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dalka iyo sidii wax looga qaban lahaa shaqo la’aanta baahsan ee muddada taagneyd, taasoo curyaamisay hormarka dhallinyarada.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmeysa xilli, shalay Golaha Wasiirradu ansixiyeen Miisaaniyadda dalka oo la gaarsiiyay 918.7 Milyan oo dollar oo ah lacag ku dhow Hal bilyan dollar oo noqoneysa miisaaniyadii ugu badneyd tan iyo yabyabkii dowladnimada.